Akeeki lola TPLF irratti Abiyyi Ahemad gaggeessee haqaaqamaa jira. – Kichuu
HomeNewsAfricaAkeeki lola TPLF irratti Abiyyi Ahemad gaggeessee haqaaqamaa jira.
MM Abiyyi Ahemad akeeka mataa isaa danda’e qabatee, lola TPLF irratti labse. Akeekichis olaantummaa TPLF barbadeessee waan ofii yaadu lafa qabsiifachuu ture.
Akka amma mul’ataa jirutti fedhiin humnoota Amaaraa fi Fedhiin Abiyyi Ahemad wal faalleessaa jira. Akka Abiyyi barbaadutti lafa naannoo Amaaraaf deebisuu kan jedhu akka hintaanetu dubbatama.
Faallaa kanaa humnootii Amaaraa fi bulchitoonni PP Amaaraa waliin ta’uudhaan daangaa lafaa babal’ifachuu yaada jedhu qabatanii socho’aa jiru.
Wal dhabdeen humna PP Amaaraa fi PP Oromiyaa gidduutti dhalataa kan jiruufis kana irratti.
Gama kaaniin injifannoo wal saamuunis mul’ataa jira. Warri Amaaraa nutu lolee TPLF cabse yoggaa jedhan, humnooti Abiyyi Ahemad jalaa ammoo lakki humna Xoophiyaa walii galaatu TPLF cabse jechuun wal dura dhaabbataa jiran.
Akeekni lola TPLF irratti banamuu kan Abiyyii dubbatuuf warri Amaaraa dubbataa jiranis waliin faallaadha. Lafa daangaa Amaaraa fi Tigiraay gidduu irratti Heeraaf seera biyyattiin furmaati argata kan jedhu Abiyyi Ahemad yoo ta’u, warri Amaaraa garuu lollee dhiignee arganne waan ta’eef kana booda lafoota akka Raayyaa, Allaammaaxxaa fi kkf irratti mariin hinfeesisu jedhaa jiru.
Karaa biraatiin humnoonni Sudaan daangaa cabsanii lafa hektaara 200,000 qote bultoota Amaaraa irraa buqqisanii qabataa jiru. Kunis qormaata biraa uumeera.
Walii galatti Abiyyi Ahemad kiyyoo gidduu seenee jira.
Leencoo Baatii maaliif gara biyyaa gale?
Akkuma asiin gaditti argitan Leencoo Baatii liqii baankii biyyaa Ameerikaa ofirraa kaffaluu dadhabee Bankruptcies apply godhee borsaa isaa rarraaftee gara biyyaa gale.
Waan horii dhabeef carraa inni qabu, qabsoo Oromoo gurguruun dabballee biltsiginnaa ta’ee dhiiga obboleessa isaa irra tarkaanfatee garaa isaa guutatee jiraachuu dha.
Lukkeelee biltsiginnaa hunda ishee irratti qorannoo ji’a ja’aa ol ta’ee gochaa turree xumurree jirra.
Akka barbaachisummaa isaatti tokko tokkoon bukoo isaanii gadi baafna. Kiyyaa Sanyii
Intaloon maqaan ishee #Timnit_Gebru jadhamtu tun dhaabbata Google keessa hojjachaa turte Aangoo isheetti fayyadamuun Facebook Activistoota Oromoo fi YOUTUBE channel Oromoo kan cufsiisa turte isheedha! Namni Aangoo isaatti fayyadame nama miidhu hin bulu dhaabbanni Google erga hojii ishee irratti dhaqqabe booda dhaabbaticha keessa ari’uun hojii irra gaggeesseera! Haqni Oromoo bulee mullachaa jira! Kuni Injifannoo guddaadha Dhugaa! Oromoonni dhaabbata Google xalayaa gara garaa erguun Qoricha intaloo tanaaf qottan #Galatoomaa!
Intaloo waan hojii keeti nyaadhu gaa amma..
Report that was widely circulated on social media by hardliner Amhara media outlets about the capture of TPLF leader Debretsion Gebremichael has been denied by the pro Tigrean media, who rather claimed to have shot down an Ethiopian warplane near Zana that was bombarding unarmed civilians earlier today.
According to TPLF sources, this is the 3rd fighter jet to be shot down by TPLF since Abiy and Isaias forces invaded the Tigray region.
“(They are) looting civilian properties, hotels, and damaging factories after looting,” the spokesman Getachew Reda told a TPLF-owned TV station. Army Colonel Shambel Beyene said late on Friday that government forces were 10 km (six miles) away from a forest in the Gore area where Debretsion, Getachew and other TPLF members were thought to be hiding.